Imaaraadka oo istusaya Muuse Biixi iyo Siciid Deni xulafana ka dhiganaya - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Imaaraadka oo istusaya Muuse Biixi iyo Siciid Deni xulafana ka dhiganaya
Madaxa Somaliland ayaa markale Imaaraadku diyaarad ku qaaday bil kadib markii uu sidan oo kale uga dhoofiyay Hargeysa. Diyaarad ay Imaaraadku leeyihiin ayaa Hargeysa ka qaadey Muuse Biixi iyo inyar oo ka mida wasiirada beeshiisa. Waxa xusid mudan in madaxa Puntland isaguna welli ku sugan yahay Imaaraadka.
Wararka qaar ee aanu helayno ayaa sheegaya in Imaaraadku rabo inuu xulafo beeleed la galo maamulada Puntland iyo Somaliland, oo ujeedadu tahay sidii loo hakin lahaa dadaalka lagu rabo in dalku yeesho dawlad dadku leeyahay.
Xulafada wahaabiyada ayaa hore ugu guulaystey inay heshiis dhex dhigaan Itoobiya iyo Eritariya taas oo Asmara u saamaxdey inay ku soo laabato bulshada caalamka.
Lama garan karo waxa Imaaraadku ka qaban karo muranka u dhexeeya labadan maamul waxase cad inuu rabo xulafo ka dhana dawlada dhexe.
“Waad fahmi kartaa maaha arin dani ugu jirto dawlada Somaliya iyo dadka Somaliyeed oo gebi ahaanba dibedda ka joogta, lacagta uu la wareegayo Imaaraadku ee jeebka u buuxinayo shaqsiyaad ay ku jiraan Muuse Biixi iyo Siciid Deni si ay fuliyaan danihiisa ayuu yiri Xasan Warsame oo Hargeysa jooga.
Si kastaba ha ahaatee waxa la sugaa waxa ka soo baxa iyo haddii ay shir jaraaid wada qabtaan. “Way soo kala dhamaysteen Muuse Biixi markii uu tagey marka hadda ma arko in wax cusub soo kordheen aan ka ahayn inuu gacanta isku saato Muuse Biix iyo Siciid Deni ayuu raaciyay Xasan Warsame.
Axmed Karaash oo xaqiijay in bartiisii faysbuug hawada laga saaray
Horjooge ku xigeenka Butlaan ayaa xaqiijay in bartiisii ...
Iiraan oo shidaalkii afraad gaysay Finansuweela iyo Taram oo baqay inuu taabto
Booyadii afraad ee ay leedahay Iiraan ayaa gaartey ...
Laabla kaca lagu dhisay maamulka Butlaan ayaa ku tumashada keenay: Indhosheel
Madaxweynihii hore ee Khaatumo Indhosheel oo hadda ku ...
Meydka 8 dhalinyara oo la soo dhigey deegaan u dhow Balcad
Waxa dadka deegaanka Galooley ee u dhow Balcad ...